တာချီလိတ်တွင် မူးယစ်ဆေးရောင်းသည့်နေအိမ်အား ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီး | ❃ Tachileik News Agency ❃ www.tachileik.net
တာချီလိတ်တွင် မူးယစ်ဆေးရောင်းသည့်နေအိမ်အား ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီး
ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း) တာချီလိတ်မြို့နယ် လွယ်တော်ခမ်းကျေးရွာအုပ်စု၊ စန်းလု(အထက်) ကျေးရွာအနီးတွင် မူးယစ်ဆေးရောင်းချနေသည့် နေအိမ်တဲတစ်ခုမှ ဘိန်းဖြူ၊ စိတ်ကြွဆေးပြား၊ စိတ်ကြွဆေးပြားရိုက်နှိပ်သည့် ကိရိယာများနှင့် လာရောက်ဝယ်ယူသူတို့အား မေလ (၂၃)ရက်နေ့က ဖမ်းဆီးရမိကြောင်း သိရသည်။
မေလ (၂၃)ရက်နေ့ နံနက် (၄)နာရီ (၅၅)မိနစ်အချိန်တွင် မူးယစ်တပ်ဖွဲ့စု(၃၀)တာချီလိတ်မှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းအဖွဲ့သည် သက်သေများနှင့်အတူ တာချီလိတ်မြို့နယ်၊ လွယ်တော်ခမ်းကျေးရွာအုပ်စု၊ စန်းလု(အထက်) ကျေးရွာအနီးနေ လော်ယို၏ နေအိမ်တဲရှေ့တွင် စိုင်းမင်းထွန်း(ခ)ဖိုးဝအား တွေ့ရှိ၍ စစ်ဆေးရာ ၎င်း၏ ဂျင်းဘောင်းဘီအိတ် အတွင်းမှ WY စာတမ်းပါ လိမ္မော်ရောင်စိတ်ကြွရူးသွပ်ဆေးပြား (၂၀၀)ပြားစီပါ (၅)ထုပ်၊ စုစုပေါင်းဆေးပြား (၁၀၀၀)ပြား၊ အလေးချိန် (၁၀၀)ဂရမ်ခန့် ဒေသတန်ဖိုး ကျပ် (၁၅) သိန်းခန့်နှင့် ဘိန်းဖြူ အလေးချိန် (ဝ.၅) ဂရမ်ခန့်ပါ (၁)ဘူး ၊ ဒေသတန်ဖိုး (၈၀၀၀) ကျပ်ခန့်၊ စိတ်ကြွဆေးပြား ရိုက်နှိပ်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် WY တံဆိပ်ပါ မှို(၁)ချောင်း၊ တံဆိပ်မပါ မှို(၁)ချောင်းတို့အား တွေ့ရှိသဖြင့် ၎င်းစီးနင်းလာသည့် နံပါတ်မပါ Honda Wave-I အမျိုးအစား ဆိုင်ကယ်(၁)စီးနှင့်အတူ သက်သေများရှေ့တွင် သိမ်းဆည်းခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ ပစ္စည်းများမှာ လော်ယိုထံမှ ဝယ်ယူလာကြောင်း သိရသဖြင့် လော်ယို၏ နေအိမ်တဲအား နံနက် (၅)နာရီအချိန်တွင် ဝင်ရောက်ရှာဖွေရာ နေအိမ် အိပ်ခန်းအတွင်းမှ ဘိန်းဖြူအလေးချိန် (၂၀)ဂရမ်စီပါ (၆)ပုလင်း၊ စုစုပေါင်း အလေးချိန် (၁၂၀)ဂရမ်ခန့်၊ ဒေသတန်ဖိုး ကျပ် (၁၉.၂) သိန်းခန့်အားလည်းကောင်း၊ အပြာရောင် ပလတ်စတစ်ကပ်ခွာအိတ်ငယ်ဖြင့် ထည့်လျက် WY စာတမ်းပါ လိမ္မော်ရောင် စိတ်ကြွရူးသွပ် ဆေးပြား (၂၀၀)ပြားစီပါ (၂၀)ထုပ်နှင့် (၁၀၀)ပြားပါ (၁)ထုပ်၊ စုစုပေါင်း စိတ်ကြွရူးသွပ်ဆေးပြား (၄၁၀၀)ပြား၊ အလေးချိန်(၄၁၀)ဂရမ်ခန့် ၊ ဒေသတန်ဖိုး ကျပ်သိန်းပေါင်း (၆၁. ၅) သိန်းခန့်အား လည်းကောင်း၊ မူးယစ်ဆေးဝါး ရောင်းချရငွေဟု ယူဆရသည့် မြန်မာငွေ ကျပ်(၂၅၀၀၀ဝ)၊ ထိုင်းဘတ်ငွေ (၁၃.၇၁၅) သိန်း၊ တရုတ်ယွမ်ငွေ (၂၄၀၀) တို့အား သိမ်းဆည်းရမိကြောင်း သိရသည်။
မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အတူ ဖမ်းဆီးရမိသူ စိုင်းမင်းထွန်း(ခ)ဖိုးဝအား တာချီလိတ်မြို့မရဲစခန်းတွင် မယ(ပ)၂၄/၂၀၁၇၊ မူး/စိတ်ပုဒ်မ ၁၅/ ၁၉(က)/၂၁ အရ လည်းကောင်း၊ မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းချပေးခဲ့သူနှင့် မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အတူ ဖမ်းဆီးရမိသည့် လော်ယိုအား မယ(ပ)၂၄/၂၀၁၇၊ မူး/စိတ်ပုဒ်မ ၁၅/ ၁၉(က)/၂၁ အရလည်းကောင်း၊ မယ(ပ)၂၅/၂၀၁၇၊ မူး/စိတ် ပုဒ်မ ၁၅/ ၁၉(က)/၂၀(က) အရ လည်းကောင်း အမှုဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်နေကြောင်း သိရသည်။
ရှမျးပွညျနယျ(အရှပေို့ငျး) တာခြီလိတျမွို့နယျ လှယျတျောခမျးကြေးရှာအုပျစု၊ စနျးလု(အထကျ) ကြေးရှာအနီးတှငျ မူးယဈဆေးရောငျးခနြသေညျ့ နအေိမျတဲတဈခုမှ ဘိနျးဖွူ၊ စိတျကွှဆေးပွား၊ စိတျကွှဆေးပွားရိုကျနှိပျသညျ့ ကိရိယာမြားနှငျ့ လာရောကျဝယျယူသူတို့အား မလေ (၂၃)ရကျနကေ့ ဖမျးဆီးရမိကွောငျး သိရသညျ။
မလေ (၂၃)ရကျနေ့ နံနကျ (၄)နာရီ (၅၅)မိနဈအခြိနျတှငျ မူးယဈတပျဖှဲ့စု(၃၀)တာခြီလိတျမှ တပျဖှဲ့ဝငျမြားနှငျ့ သကျဆိုငျရာ ပူးပေါငျးအဖှဲ့သညျ သကျသမြေားနှငျ့အတူ တာခြီလိတျမွို့နယျ၊ လှယျတျောခမျးကြေးရှာအုပျစု၊ စနျးလု(အထကျ) ကြေးရှာအနီးနေ လျောယို၏ နအေိမျတဲရှတှေ့ငျ စိုငျးမငျးထှနျး(ခ)ဖိုးဝအား တှရှေိ့၍ စဈဆေးရာ၎င်းငျး၏ ဂငျြးဘောငျးဘီအိတျ အတှငျးမှ WY စာတမျးပါ လိမ်မျောရောငျစိတျကွှရူးသှပျဆေးပွား (၂၀၀)ပွားစီပါ (၅)ထုပျ၊ စုစုပေါငျးဆေးပွား (၁၀၀၀)ပွား၊ အလေးခြိနျ (၁၀၀)ဂရမျခနျ့ ဒသေတနျဖိုး ကပျြ (၁၅) သိနျးခနျ့နှငျ့ ဘိနျးဖွူ အလေးခြိနျ (ဝ.၅) ဂရမျခနျ့ပါ (၁)ဘူး၊ ဒသေတနျဖိုး (၈၀၀၀) ကပျြခနျ့၊ စိတျကွှဆေးပွား ရိုကျနှိပျရာတှငျ အသုံးပွုသညျ့ WY တံဆိပျပါ မှို(၁)ခြောငျး၊ တံဆိပျမပါ မှို(၁)ခြောငျးတို့အား တှရှေိ့သဖွငျ့၎င်းငျးစီးနငျးလာသညျ့ နံပါတျမပါ Honda Wave-I အမြိုးအစား ဆိုငျကယျ(၁)စီးနှငျ့အတူ သကျသမြေားရှတှေ့ငျ သိမျးဆညျးခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။
အဆိုပါ ပစ်စညျးမြားမှာ လျောယိုထံမှ ဝယျယူလာကွောငျး သိရသဖွငျ့ လျောယို၏ နအေိမျတဲအား နံနကျ (၅)နာရီအခြိနျတှငျ ဝငျရောကျရှာဖှရော နအေိမျ အိပျခနျးအတှငျးမှ ဘိနျးဖွူအလေးခြိနျ (၂၀)ဂရမျစီပါ (၆)ပုလငျး၊ စုစုပေါငျး အလေးခြိနျ (၁၂၀)ဂရမျခနျ့၊ ဒသေတနျဖိုး ကပျြ (၁၉.၂) သိနျးခနျ့အားလညျးကောငျး၊ အပွာရောငျ ပလတျစတဈကပျခှာအိတျငယျဖွငျ့ ထညျ့လကျြ WY စာတမျးပါ လိမ်မျောရောငျ စိတျကွှရူးသှပျ ဆေးပွား (၂၀၀)ပွားစီပါ (၂၀)ထုပျနှငျ့ (၁၀၀)ပွားပါ (၁)ထုပျ၊ စုစုပေါငျး စိတျကွှရူးသှပျဆေးပွား (၄၁၀၀)ပွား၊ အလေးခြိနျ(၄၁၀)ဂရမျခနျ့၊ ဒသေတနျဖိုး ကပျြသိနျးပေါငျး (၆၁. ၅) သိနျးခနျ့အား လညျးကောငျး၊ မူးယဈဆေးဝါး ရောငျးခရြငှဟေု ယူဆရသညျ့ မွနျမာငှေ ကပျြ(၂၅၀၀၀ဝ)၊ ထိုငျးဘတျငှေ (၁၃.၇၁၅) သိနျး၊ တရုတျယှမျငှေ (၂၄၀၀) တို့အား သိမျးဆညျးရမိကွောငျး သိရသညျ။
မူးယဈဆေးဝါးမြားနှငျ့အတူ ဖမျးဆီးရမိသူ စိုငျးမငျးထှနျး(ခ)ဖိုးဝအား တာခြီလိတျမွို့မရဲစခနျးတှငျ မယ(ပ)၂၄/၂၀၁၇၊ မူး/စိတျပုဒျမ ၁၅/ ၁၉(က)/၂၁ အရ လညျးကောငျး၊ မူးယဈဆေးဝါးရောငျးခပြေးခဲ့သူနှငျ့ မူးယဈဆေးဝါးမြားနှငျ့အတူ ဖမျးဆီးရမိသညျ့ လျောယိုအား မယ(ပ)၂၄/၂၀၁၇၊ မူး/စိတျပုဒျမ ၁၅/ ၁၉(က)/၂၁ အရလညျးကောငျး၊ မယ(ပ)၂၅/၂၀၁၇၊ မူး/စိတျ ပုဒျမ ၁၅/ ၁၉(က)/၂၀(က) အရ လညျးကောငျး အမှုဖှငျ့လှဈဆောငျရှကျနကွေောငျး သိရသညျ။